James Swan oo fariin muhiim ah usoo diray dadka Soomaaliyeed (Akhriso) | arlaadii.com
Home WARARKA MAANTA James Swan oo fariin muhiim ah usoo diray dadka Soomaaliyeed (Akhriso)
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa fariin uu usoo diray bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan dhiiro galinta nabada iyo joojinta colaadaha.
War Saxaafadeed uu soo saaray James Swan ayuu ku sheegay in xiligan loo baahan yahay joojinta colaadaha dhiiga badan ku daateen,waxa uuna bogaadiyay dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjarao colaadaha dalka la degay.
Halkan ka Akhriso Baaqa James Swan
“Dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu baahan yihiin in la soo afjaro colaadda iyo toogashada macno darrada ah iyo qaraxyada ay muddada dheer usoo joogeen. Waxaan bogaadineynaa dadaallada joogtada ah ee ay waddo Dowladda Soomaaliya, oo ay taageerayaan saaxiibbada caalamka, si loo hagaajiyo amniga loona soo afjaro rabshadaha. Nabad waarta waxay sidoo kale u baahantahay hanaan dowladnimo oo loo wada dhan yahay, cadaalad loo siman yahay, iyo wada hadal joogto ah oo dhexmara dadka Soomaaliyeed ee wanaagga iyo samaha jecel si loo gaaro is-afgarad siyaasadeed iyo dib-u-heshiisiin qaran,” ayuu yiri Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud u qaabilsan Soomaaliya, James Swan.
“Maalintan maanta ah, waxaan ku boorinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay sii xoojiyaan go’aankooda ah inay kuwada noolaadaan midnimo, si ay Soomaaliya ugu tallaabsato waddada nabadda iyo xasilloonida,” ayuu raaciyay.
Golaha loo Dhanyahay ee Qaaramada Midoobay ayaa aasaasay Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda sanadkii 1981. Labaatan sano ka dib, 2001, Golaha loo Dhanyahay wuxuu si wada jir ah ugu codeeyey in maalintaas loo asteeyo inay noqoto xilli rabshad la’aan iyo xabbad-joojin lagu xuso, iyo in Maalintaas loogu dabaal-dego [munaasabado] waxbarasho iyo wacyi-gelin dadweyne oo ku saabsan arrimaha la xiriira nabadda.
Kooxda Xuutiyiinta oo hal arin darteyd u joojisay Weerarada ay ku qaado Sacuudiga